ညီလင်းသစ်: ဘီပီအေ (သို့မဟုတ်) မမြင်ရသော အန္တရာယ်
Posted by ညီလင်းသစ် au 11.12.11
I got so much knowledge after reading your post, thank you. Should use only4, 5, 1, 2. Do not warm food in plastic boxes. Hehe memorizing to avoid :))) Thanks again.
ဗဟုသုတတိုးတယ် ကိုညီရေ..ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ...
ခေတ်မှီတိုးတတ်လာတာနဲ့အမျှ ဘဝရှင်သန်မှုက ပိုလို့
ခက်ခဲလာတယ်လို့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ပြီးတွေးနေမိတယ်။
ဟိုး...ငယ်ငယ်က ဖန်ပုလင်းထဲရေထည့်သောက်၊ဒန် သို့
ကြွေခွက် တွေနဲ့ပဲ အစားအသောက် ထည့်စားခဲ့ရတဲ့
ခုချိန်မှာတော့ ဒါတွေလွန်ခဲ့ပါပြီ...။ခုတော့ ရှောင်သင့်တာ
(အင်း...ဒီတိုင်းဆို သံဘူးဘီဘီတွေအစား ပုလင်းဘီဘီ
ဗဟုသုတတိုးစေတဲ့ ပို့လေးတင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ
ညီလင်းရေ ဗဟုသုတတိုးစေတဲ့ ဒီပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါ ။ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်တယ် ဆိုတဲ့ စကားကတော့ သိပ်မှန်တယ် ကင်ဆာဖြစ်မှာကြောက်လို့ ခုနောက်ပိုင်း တခါတလေကျရင် စားစရာတွေ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်နဲ့ နွှေးစားတာတောင် နည်းနည်း ဆင်ခြင်နေမိပြီ အေးအေးကြီးဘဲ စားလိုက်တယ် ပြီးရော .. ကင်ဆာဖြစ်မှာထက် ကတုံး ( ခေါင်းတုံး ) ဖြစ်မှာ ပိုကြောက်တယ်း)
ပျက်စီးမှု့တွေလည်း များလာပြီ ..
(( 2012 လည်း ရောက်တော့မယ် .. :P
ဖတ်လိုက်ရတာ ဗဟုသုတ ရတယ် ..
ကျေးဇူးပါ ကိုညီလင်းသစ် ..
ဗဟုသူတတွေအများကြီးရစေတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Valuable post.I prefer porceline than
plastic products.But i often use those things to warm up.I'll try to avoid it.Thanks .
ဘီပီအေရဲ့ ဆိုးကျိုးက တကယ့်ကို ကြောက်စရာကြီးပါလားနော်။ ခုလို လူတိုင်းသိသင့်တဲ့ ဘီပီအေရဲ့ ဆိုးကျိုးဗဟုသုတကို သေသေချာချာရေးပြီး ဝေမျှပေးတဲ့ ကိုညီလင်းသစ်ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ဟိုးအရင် ကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ ပလတ်စတစ်ဆိုးကျိုးတွေကို ဆရာမဂျူးရဲ့ ဆောင်းပါးတွေဖတ်ပြီး ထိတ်လန့်ဆင်ခြင်ခဲ့ဖူးတယ်။
ခုတစ်ခါ ဘီပီအေကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချနိုင်အောင် စားသောက်ဆင်ခြင်နေထိုင်ဖို့ ကိုညီလင်းရဲ့ ပို့စ်ထဲက အချက်အလက်တွေ မှတ်သားခွင့်ရလိုက်လို့ တကယ့်ကို ကျေးဇူးပါ။
အတော့်ကိုအဖိုးတန်တဲ့ စာလေးပဲ ကိုညီလင်းသစ်။ သတိပေးသံ ဟိုတဟ ဒီတစ ကြားဖူးခဲ့ပေမဲ့ ဒီလို စုံစေ့ ထောင့်စေ့အောင် မသိခဲ့ရဖူး။ ကျေးဇူးဗျာ..
အသင့်သောက်နိုင်တဲ့ သံဗူးတွေ ပလပ်စတစ်ဗူးတွေနဲ့ အချိုရည်တွေသောက်ရင်မကောင်းဘူးလို့သိထားပေမယ့် ခုလိုအသေးစိပ်သိရတာကျေးဇူးပါပဲ ကိုညီလင်းသစ်ရေ.......။
ဘီပီအေရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက မမြင်ရပေမဲ့ ကြောက်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ
ပြီးတော့လည်း ရှောင်ဖို့လည်း အမှတ်တမဲ့ဆို အတော်ခက်တယ်
ခုခေတ်မှာ အိမ်တိုင်းလိုလို မိုက်ခရိုဝေ့ရယ်၊ မယ်လမင်းနဲ့ ပလပ်စတစ်ခွက်တွေက မရှိမဖြစ် နေရာယူလာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတောင် ဘယ်လောက်များ နေရာယူနေပြီလဲမသိဘူး
မယ်လမင်းခွက်နဲ့ ရေနွေး၊ ကော်ဖီသောက်ခဲ့တာ နေ့စဉ်လိုလိုပါဘဲ။ (ဟိုတုန်းက)
ပြီးတော့ မြန်မာပြည်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ ကြွေ့ပန်းကန်အစား မယ်လမင်းတွေအသုံးများလာတာလည်း စိတ်ပူစရာ.. ဖြစ်နိုင်ခြေတွေ သိထားတော့လည်း ဆင်ခြင်ရတာပေါ့နော်. အထူးသဖြင့်တော့ ကလေးတွေအတွက် ပိုအရေးကြီးနေတာပါဘဲ။ ပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးကိုညီလင်း
My pleasure..! Sharing is caring, isn't it? :)
ကျနော်တော့ ပုလင်းတွေကိုပဲ အားပေးနေတာ ကြာပြီဗျ၊း) ဘီပီအေ ကိစ္စ မသိခင်ကတည်းကပဲ ဆိုပါတော့၊ သံဘူးတွေက အလူမီနီယမ်နဲ့ လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ အလူမီနီယမ် recycle အမှိုက်ပုံးက သိပ်အများကြီး မထားပေးဘူးဗျ၊ အဲ..ပုလင်းကတော့ သူ့အတွက် ကွန်တိန်နာတွေ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့ရတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ၊း)
အေးအေးကြီးပဲ စားတော့လည်း အေးရာအေးကြောင်း ပဲပေါ့ဗျာ..နော၊း) ကင်ဆာကို ကြောက်ရခြင်းအကြောင်း ကိုတော့ ရေလည်သဘောကျ သွားပြီ...ဟားဟား၊းD
ပုလင်းတွေက တကယ်ပဲ ဘေးကင်းပါတယ်၊ ဖန်က သဲကရတဲ့ ဆီလီကာနဲ့ လုပ်ထားတာ ဖြစ်လို့ သူနဲ့ထိတွေ့တဲ့ အရာတွေအပေါ် ဓါတ်ပြုခြင်း မရှိသလောက် နည်းပါတယ်..၊
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ကိုများ ဆိုလိုချင်ရော့ သလားပဲ၊း)
သိသလောက် မျှဝေခွင့်ရတာကိုပဲ ဝမ်းသာရပါတယ်..၊
Me too. It happens to me from time to time dispite BPA knowledge. :) Gotta be careful all the time. :)
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ပလပ်စတစ်က သုံးရတာ လွယ်ကူပေါ့ပါး တာကလွဲလို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက်ရော၊ လူ့ကျန်းမာရေး အတွက်ပါ သိပ်ကောင်းကျိုး မပြုပါဘူး၊ အပြေးအလွှား လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါနော်..၊
စိတ်ဝင်တစား ရှိနေတာကိုပဲ ကျနော်က ကျေးဇူး တင်ရမှာပါ၊ သူ့ရဲ့ effect က ချက်ချင်းမဟုတ်တော့ တချို့တွေက စိတ်မဝင်စားကြဘူးဗျ...၊
ကျနော်လည်း အဲဒီ မယ်လမင်း ခွက်တွေနဲ့ အားရပါးရ စားသောက် ခဲ့တာပေါ့ဗျာ၊ ပေါ့ပါးတယ်၊ ခိုင်ခန့်တယ်၊ ဈေးတော်တယ်၊ ကဲ..ဘာလို သေးလဲ?း) ဆိုးကျိုးတွေ ဘယ်လောက်ပြောပြော ဘိုင်းကနဲ လဲသေတာမျိုး မဟုတ်တော့ တချို့ကလည်း နောင်ခါလာ၊ နောင်ခါဈေး လို့ပဲ သဘောထားကြမယ် ထင်ပါတယ်..။
ကယ်လီဖုိုးနီးယားက ယူအက်စ်မှာ ဂရင်းနင်း တို့ အော်ဂဲနစ်တို့ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အအော်ဆုံးဆိုတော့ဘီပီအေ ဖရီးဆုိုတာကို ဖုဒ်ကွန်တိန်နာတွေမှာ တွေ့ တွေ့ နေတော့ သူများကိုမေးကြည့်တော့ ပလတ်စတစ်ဆုိုတာဘဲသိခဲ့တယ်။ ဒီပို့ စ်ဖတ်မှဘဲသေသေချာချာနားလည်တော့တယ်။ကျေးဇူးပါရှင်။ ပလတ်စတစ်နဲ့ မနွှေးမိအောင်လို့ တော့တော်တော်သတိပြုဆင်ခြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အမြဲတော့မရှောင်နုိုင်ပြန်ဘူး။း(
ပလပ်စတစ်ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေကိုလုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ အခုရုံးကိုယူနေတဲ့ထမင်းဘူးကတော့ ပလပ်စတစ်ဘူးပေါ့။စားခါနီးဆိုမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်နဲ့ နွှေးလိုက်သေးတယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာဆေးပညာတိုးတက်လို့ကိန်းဂဏန်းအတိအကျသိနေရတာလား၊စားသောက်နေထိုင်မှုကြောင့်အဖြစ်များတာလားဆိုတာ အတိအကျမသိပေမယ့် ကင်ဆာရောဂါသည်အရမ်းကိုများတယ်။
ဘီပီအေ ဆိုးကျိုးက လန့်စရာပါလား ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ မယ်လမင်းတွေ အသုံးပြုနေတာ ရပ်တန့်က ရပ်မှပါဘဲနော်။ မမြင်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကလည်း အလစ်ချောင်းနေလိုက်ကြတာ။ မစားရဲ၊ မသွားရဲအောင်ပါပဲနော်။ ဘီပီအေကို ဒီမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မသိကြသေးလောက်ဘူး။ နောက်ဆိုရင် မယ်လမင်းအစား ကြွေထည်တွေ ပြန်တစ်ခေတ်ဆန်းလာလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့...။
အောင်မလေး ကြောက်စရာကြီးရယ်း(
အခုလို ဘီပီအေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာပေးလေးတွေကို ဗဟုသုတ လေ့လာခွင့်အားနည်းသူများဆီလည်း
တီတင့်တို့အိမ်မှာလည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ပစ္စည်းကို
မျှဝေပေးတဲ့ ဗဟုသုတတွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ဗဟုသုတတွေ အများကြီးရလို့ ကျေးဇူးပါအကို...
ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း..
ကြောက်စရာပဲ ကျနော်လည်း သံဗူးနဲ့ အချိုရည်တွေ တော်တော်သောက်ဖြစ်နေတယ် လျှော့အုံးမှာ တိုးတက်မှုနဲ့အတူ အန်တရယ်တွေကလည်း ပါ လာတတ်တာပဲ ။ ကျေးဇူး အစ်ကို ။
လင်းခန့်said...
အရေးသင့်ဆုံးပိုစ့်လေးပါပဲဗျာ။ဘီပီအေ ဆိုတာခုမှကြားဖူးတာပါဗျာ။ရှောင်ရှားဖို့ ဆိုဝေးရောပေါ့။ကျေးဇူးအထူးပါဗျာ။
တကယ်ကို စေတနာ ပါပါနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ရင်း တွေးမိတာက ကျွန်တော်တို့ ဒီလို ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ဘယ်လို ရောဂါမျိုးတွေ ဘယ်လောက်တောင် ရနေပြီလဲ ဆိုတာပါဘဲ အစ်ကို...။ စဉ်းစားမိရင် ရင်မောမိတယ် အစ်ကို...။ ခုလို သိပြီဆိုတော့ ကိုယ့်ဘက်က ရှောင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရတော့မှာပေါ့။ ဒီပိုစ့်လေး အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို...
ခုမှစကြားဖူးတာပါ။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ရှောင်ရန်တွေလဲ များလာတယ်ဗျနော်။ ဗဟုသုတတွေ ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ အမြဲလာလည်နေပေမယ့် ခုမှမန့်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။
အန္တရာယ်ရှိမှန်းသိသိကြီးနဲ့ ဘယ်လိုမှ မကင်းနိုင်သေးတဲ့ အရာတွေပါပဲ။ အိမ်မှာသုံးနေရတဲ့ အစိုးရက ရေပေးဝေတဲ့ ရေပိုက်တွေ သောက်ရေသန့်ဗူးတွေ မယ်လမင်း အသုံးအဆောင်တွေ ပလပ်စတစ် ဗူးခွက်တွေ ရှောင်မရအောင်ကို အသုံးတွေက တွင်ကျယ်နေတာ။ အဲဒီလို အနောက်နိုင်ငံတွေမှာက ရှောင်မယ်ဆို ဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ အနေအထားမှာရှိပေမယ့် ဖွံ့ဖြိုးမှုသိပ်မရှိသေးတဲ့ ကျန်းမာရေး အသိတရားတွေ နည်းပါးနေသေးတဲ့ အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတော့ ရှောင်ဖို့မပြောနဲ့ နည်းပါးအောင် လျှော့ချနိုင်ဖို့တောင် မလွယ်သေးတဲ့ အနေအထားပဲ ကိုညီလင်းသစ်ရေ။ ဒီနိုင်ငံမှာများဆို ကြွပ်ကြွပ်အိတ် ဖော့ဗူး တစ်ခါသုံး ပလပ်စတစ် အသုံးအဆောင် ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေများ ဖောချင်းသောချင်းကို သုံးကြတာ။ ဘာဝယ်ဝယ် ဘာစားစား ရှောင်လို့ကို မလွတ်ဘူး။ မှတ်သားလိုက်နာစရာ ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါရှင်။
တကူးတက အချိန်ပေးပြီး စာလာဖတ်လို့ ကျေးဇူးလည်းတင် ဝမ်းလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား အားပေးစကားလေးအတွက်လည်း ထပ်ဆင့်ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်။
ကိုညီလင်းသစ်ရေ...အုန်းမုတ်ခွက် နဲ့ သဲအိုးလေးနဲ့ အေးစိမ့်နေတဲ့ရေလေးကို သတိရမိတယ်။ သဘာဝကြီးကို လွန်ဆန်ပြီး ဖန်တီးတာမှန်သမျှ ဘာမှ မကောင်းပါလားနော်။ ပလပ်စတစ်ရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ကြားနေပေမဲ့ အလွယ်တကူ အဆင်တပြေ သုံးနေမိကြတာပါပဲ။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်သုံးတာ မကြိုက်ပေမဲ့ လွယ်လွယ်သုံးလိုက်မိနေတာ။ အဆင်သင့် စားစရာတွေကိုပဲ လွယ်လွယ် စားသောက်နေမိတာ...။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ များလိုက်တာနော်....။ ရှောင်သင့်တာတွေကို ခုလို စေ့စေ့စပ်စပ်ရေးပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါရှင်
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို အများဖတ်လို့ရအောင် Myanmar Blogs Digest အတွက် ယူသွားလိုက်တယ်နော်.